Biko azakwala azịza achọrọ ka ọhaneze zaa | Martech Zone
Monday, October 23, 2017 Fraịde, Ọktọba 27, 2017 Douglas Karr
Otu ngwa mkpanaka kachasị amasị m bụ Lee. Ọ na-eme ka m pụọ n'okporo ụzọ, na-enyere m aka izere ihe egwu, ma na-adọ m aka na ntị nke ndị uwe ojii n'ihu - na-azọpụta m na tiketi na-agba ọsọ ma ọ bụrụ na m na-arọ nrọ ụbọchị ma na-agagharị na njedebe.
Anọ m n'ụgbọala ụbọchị gara aga wee kpebie ịkwụsị site na ụlọ ahịa sịga iji bulie onyinye maka enyi m, mana ejighị m n'aka ndị dị nso. Na nsonaazụ adịghị oke kemmasi… na a sịga ụlọ ahịa 432 kilomita efep dị ka "gburugburu m". Ya mere, emere m ihe ezigbo onye ahịa ọ bụla ga-eme. Enwere m nseta ihuenyo ma soro ya Waze.
.@waze i chere na m ga-anya ụgbọala 432 maka sịga? Echeghị m na nke ahụ bụ "gburugburu m". pic.twitter.com/lLB8pukoQm
- Douglas Karr (@onyedikachi_) October 20, 2017
O di nwute, nke a bụ nzaghachi m natara:
Oh mba! Nwere ike ịnyefe akụkọ ahụhụ ebe a: https://t.co/FnxjYba2tF
Ebuka (@nwachukwu) October 20, 2017
Nke m zara ozugbo:
Naanị m kọọrọ ya ebe a.
Eriri ahu kwusiri ebe ahu.
Amachaghị m ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme nke a, mana ọ kwesịrị ịkwụsị. Y’oburu n’inye ndi kompeni gi uzo nke ndi ahia gi, ikwesiri ka ha gha akuko uzo a, ma gha aghaghi inye ndi mmadu ike imeghari.
1 n'ime ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi 4 mere mkpesa site na mgbasa ozi, na 63% na-atụ anya enyemaka
Enweela m nkeji ole na ole n'ehihie n'ihi na m lebara anya na njirimara nke ngwa ahụ, agaghị m agagharị na ibe ọzọ, jupụta ụyọkọ ozi, ma chere nzaghachi… Naanị m chọrọ ka ị mara ngwa gi tijiri ka inwere ike idozi ya.
Nzaghachi dị ukwuu gaara abụ Daalụ @douglaskarr, Agwara m ndị otu mmepe anyị okwu a.
Tags: Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịaahịa arịrịọelekọta mmadụ mediaọrụ ndị ahịa soshal midiawezuga
Ọkt 23, 2017 na 7:16 PM
Kpamkpam kwenyere. Emeela m nke a ugboro ole na ole, enwetara m azịza nke mbụ nke “ị nwere ike mejupụta mkpesa ahụhụ” ma ọ bụ “ị nwere ike zitere anyị ozi na X” - Na m zara dịka ị mere.